MAZE Alpha Iraisam-pirenena Fanomezana | Androidsis
Fanomezana iraisam-pirenena MAZE Alpha
Francisco Ruiz | | fifaninanana, Fitaovana Android
Miverina miaraka amin'ny terminal Android vaovao ho an'ny International Draw isika, amin'ity indray mitoraka ity ny Raffle iraisam-pirenena MAZE Alpha mahasoa kely izany eto Androidsis andao ny unboxing y famerenana video feno momba azy io.
Raha tianao izany MAZE Alpha ho anao mandrakizay, afaka tanteraka na dia amin'ny sarany fandefasana fandoavam-bola amin'ny Androidsis aza, dia fantatrao fa mila tsindrio fotsiny ianao «Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity».
Raha te hahafantatra bebe kokoa ianao amin'ny fomba mandray anjara amin'ny MAZE Alpha International Giveaway Manoro hevitra anao aho mba hijerena ilay horonan-tsary nafangaroko teo am-piandohan'ity lahatsoratra ity, satria ao no anazavako amin'ny an-tsipiriany ny fomba handraisanao anjara amin'ny fisarihana iraisam-pirenena an'ny MAZE Alpha izay misy antsika, manomboka anio ary mandra-pahatongan'ny Alahady manaraka, 8 Oktobra 2017 amin'ny 23:59 alina, sary ao amin'ny Androidsis.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny MAZE Alpha International Giveaway
Handray anjara amin'ny Raffle iraisam-pirenena MAZE Alpha, terminal iray izay tiako manokana aorian'ny folo andro nampiasako mafy, dia tsy maintsy mahafeno fepetra roa fotsiny ianao. Ny voalohany aloha mazava ho azy ary matetika no atao amin'ireto tranga ireto dia ny fisoratana anarana amin'ny fantsona horonantsary Androidsis ao amin'ny YouTube, na izay tonga amin'ilay zavatra mitovy. misoratra anarana amin'ny Androidsisvideo.
Ny takiana faharoa takiana amin'ity tranga ity dia sady loka ho an'ireo mpikambana mihoatra ny 4400 izay efa ananantsika ao amin'ny vondrom-piarahamonina Androidsis ao Telegram, vondrom-piarahamonina iray izay mamaly ny anaran'ny @AndroidsisGroup, izany ve midira amin'ny fiarahamonina ary mandray anjara amin'izany na dia amin'ny alàlan'ny fandefasana fiarahabana ho an'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo fotsiny aza na amin'ny fampahafantarana ny tenanao amin'izany na ohatra milaza fa te handresy ny MAZE Alpha izay Androidsis dia raffling.
Izay ihany no tokony hataonao mendrika ny loka farany amin'ny MAZE Alpha, na dia miampy ary Safidio mba hahazoana fidirana misimisy kokoa amin'ny antsapakaAndao handeha izay azo isaina na bileta hafa! Fa izany dia hanana safidy ho anao koa ianao hanasana ny namanao handray anjara, jereo ny horonantsary momba ny fanadihadianay ny Maze Alpha, manatevin-daharana ny Fantsona fanolorana sy raffles azonay amin'ny Telegram izay ahitanao ny tolotra tsara indrindra amin'ny lafiny haitao ary koa fidirana mivantana sy mivantana amin'ireo raffle marobe tanterahinay amin'ny Androidsis.
Ity misy bokotra iray hidiranao mivantana amin'ny tranokalan'i Gleam.io izay toerana hanatanterahanay ity fisarihana iraisam-pirenena ho an'ny MAZE Alpha ity, ilay ampiasainay amin'ny famerenana horonantsary ny terminal ary namela ahy ho amin'ny fitiavana very.
Aza adino ny miditra ao amin'ny kaonty Google-nao mba hahafahanao mandray anjara tsara ka, raha ianao no mpandresy, dia afaka mifandray aminao izahay.
Tsara ny manamarika fa izay mandresy amin'ny antsapaka ankoatr'izay ho mpanjifa amin'ny fantsona Youtube Androidsis ary hiditra ao amin'ny Androidsis Group amin'ny Telegram ary nandray anjara tamin'izany izay hojerentsika tsara, ankoatr'izay Tsy maintsy mamaly ny mailaka halefa ianao hitaky ny lokanao ao anatin'ny 48 oraRaha 48 ora no mbola tsy nitakiana ny loka dia hofoanana ny mpandresy ary olona vaovao no hofidina, ary hanana 48 ora hitaky ny lokany koa izy ireo.
MAZE Fanomezana Alfa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » fifaninanana » Fanomezana iraisam-pirenena MAZE Alpha
Daniel de la Torre Nores dia hoy izy:
Toa finday be io amiko, amin'ny kalitao / vidiny.
Valiny tamin'i Daniel de la Torre Nores
Sergio Brains dia hoy izy:
Valiny tamin'i Sergio Brains
Julian Ns dia hoy izy:
Ny tena !! Manantena aho fa handresy azy io….
Valiny tamin'i Julian Ns
Franky Javier Otaku dia hoy izy:
Valiny tamin'i Franky Javier Otaku
fernando solis dia hoy izy:
Salama, manana terminal tsara be aho, manantena aho fa handresy azy
Valiny tamin'i Fernando Solis
Alain Rasilla dia hoy izy:
Manantena aho fa handresy amin'ny fifaninanana!
Valiny tamin'i Alain Rasilla
Juan A. Fuentes dia hoy izy:
Salama, Telegram dia tsy azo idirana ho an'ireo jamba mampiasa mpamaky efijery, tsy rariny izany, manavakavaka anay ianareo.
Valiny tamin'i Juan A. Fuentes
Yunior dia hoy izy:
Tena tsara amin'ny fotoana voalohany hidirako eto ary toa tsara ilay raffle smartphone
Mamaly an'i Yunior
700 dia hoy izy:
Valio ny 700
Hugo Bustamante T dia hoy izy:
Valiny tamin'i Hugo Bustamante T
Joaquin Ximo dia hoy izy:
tsara sary finday sy tsara, tsara
Valiny tamin'i Joaquin Ximo
finday mahafinaritra sy fanomezana mangatsiatsiaka mahafinaritra
Laly diaz dia hoy izy:
Tsara !!. Misaotra tamin'ny fanomezana!
Valiny tamin'i Laly Diaz
Ahoana no ahafantarana hoe iza no nanaraka ahy tao amin'ny Instagram
Lalao sy fampiharana vaovao 4 hanombohana ny herinandro amin'ny fifaliana